Kusvika kwekunyudza Kushambadzira, Kutapa nhau, uye Dzidzo | Martech Zone
Yechokwadi uye yakawedzerwa chokwadi chichaenda kunotora chinzvimbo chakakura mune rako ramangwana. TechCrunch anofanotaura iyo nhare AR ingangove iri $ 100 bhiriyoni musika mukati memakore mana! Izvo hazvina basa kana iwe uchishandira yekucheka-kumucheto tekinoroji kambani, kana mune yekuratidzira iri kutengesa hofisi fenicha, rako bhizinesi richabatsirwa neimwe nzira neanonyudza ekushambadzira ruzivo.
Ndeupi musiyano uripo pakati peVR neAR?
Virtual chaicho (VR) ndeyekuvaraidza kwedhijitari kwenzvimbo dzakatenderedza mushandisi, nepo yakawedzera chokwadi (AR) inoputira chaiwo zvinhu mune chaiko nyika.
Usanditenda? Tarisa uone mamwe maindasitiri atogamuchira VR / AR.
Vhiki rino CNN yakatanga chikamu chakazvitsaurira cheVR chenhau. Iri boka rinofukidza makuru enhau zviitiko mu360 vhidhiyo uye ichipa kumberi kumberi chigaro kune vanoona. Unogona here kufungidzira uri pamitsara yepamberi munzvimbo yehondo, uine chigaro chemberi kumberi kuWhite House mutauri wekudhinda, kana kumira muziso redutu? Ndozvichaunzwa kutapa kutapa, zvichitibvumidza padyo nenyaya kupfuura nakare kose. CNN yakatanga yuniti nyowani nekuburitsa iyo VR vhidhiyo nyaya kufukidza iyo kumhanya kwenzombe kuSpain.
Pamusoro pegore rapfuura, CNN yakayedza neVR, ichiburitsa inopfuura makumi mashanu enhau nhau mumhando yepamusoro ye50 vhidhiyo, ichipa vateereri nzwisiso yakadzama yekuparadzwa kweAleppo, kumberi kwekutarisa kweKutangwa kweUS uye mukana wekunakidzwa ye skydiving - muhuwandu, ichigadzira inopfuura mamirioni makumi matatu maonero ezve 360 ​​zvemukati pane Facebook chete. Kunobva: CNN
Lowe ari kukomberedza kubheja kwayo kuti VR inogona kukanganisa indasitiri yekuvandudza imba. Ivo vari kuvhura mu-chitoro chaicho chiitiko chiitiko chakagadzirirwa kupa vatengi maoko-pane dzidzo yemapurojekiti senge kusanganisa dhaka kana kuisa tile. Mukuyedza kumhanya Lowe akataura kuti vatengi vaive ne 36% zvirinani kurangarira maitiro ekupedzisa chirongwa uchienzaniswa nevanhu vanoona vhidhiyo yeYouTube.
Lowe maitiro echikwata aona kuti zviuru zvemamirioni zviri kurasa mapurojekiti e DIY nekuti vanoshaya pekuvandudza chivimbo uye nenguva yemahara yepurojekiti. Kune yaLowe, chaiyo chaiyo inogona kunge iri nzira yekudzosera iwo maitiro. Kunobva: CNN
Kubva pakuona kwekushambadzira, iyo inonyudza yekushambadzira izwi iri kutsanangurwa zvachose. Mumwe anogona kutanga kufungidzira kuti mangani mikana ichagadzirwa yekushambadzira, kuiswa kwechigadzirwa, uye nzira dzekugadzira dzekuratidzira mhando. VR inogadzirisa matambudziko mazhinji kune vatengesi. Iyo inotipa isu nzira yekugadzira inonyudza chiitiko icho chinokanganisa, chisingakanganwiki, uye chinonakidza. Izvo hazvisi kuwana chero zvirinani kupfuura izvo!
Zvimwe zvishoma zvinonakidza chokwadi kwauri. Vimeo ichangowedzerwa iko kugona kurodha uye kuona 360-degree mavhidhiyo. Izvi zvichapa vagadziri vemafirimu uye zvimwe zvigadzirwa kuti varatidze uye vatengese mazana matatu nemakumi matatu. Ngatirege kukanganwa nezve facebook futi. Kusvika pari zvino pave nemamiriyoni anodarika miriyoni imwe mazana matatu nemakumi masere nemakumi matatu emavhidhiyo uye mapikicha makumi maviri nemashanu emadhigirii mazana matatu neshanu akatumirwa. Iko hakuna chikonzero chekufunga maitiro aya haasi kuzoenderera mberi.
Tinoda kuda kunzwa pfungwa dzako pane ramangwana reVR / AR. Yakawanda sei mhedzisiro yaunonzwa kuti ichave iine pane yako indasitiri? Ndapota shandisai!
Tags: CNNImmersivekunyudza dzidzokunyudza kutapa nhaukunyudza kushambadziralowe'skuderedza holoroomVimeovimeo 360